Taariikhda My Butros » 15 Best Twitter Accounts in Raac Talada Dating in 2015
Last updated: Jan. 17 2021 | 4 min akhri
In bulshadeena dijitaal kaxayn hadda, waxaan ku tiirsan yihiin inta badan oo ka mid ah macluumaadka internet ka helo. Dad badan ayaa u isticmaalaan warbaahinta bulshada si gaar ah in aad ula xiriirto qoyskaaga iyo saaxiibadaa iyo in ay sii updated dhacdooyinka caalamka hadda, laakiin waxa ku saabsan helitaanka talo xiriir?
Twitter waxay siisaa dadka isticmaala fursad ay ku wadaagaan macluumaadka ee 140 characters ama wax ka yar kuwa raacsan ay. Dad badan ayaa ku soo booday on fursad ay ku isticmaalaan Twitter shoqo in kaliya ma ahan link in ay shaqadooda laakiin si ay u bixiyaan talo kuwa xiiseyneyso.
Ma jiro ogaaaday shukaansiga iyo xiriirka qorayaasha, mareeg, waxa ayna khubarada isticmaalka Twitter iyada oo loo adeegsanayo xaaqay talo shukaansi. Waxaan sameeyay liiska qaar ka mid ah xisaab Twitter weyn masrexeedyo shukaansi iyo talo xiriir. Haddii aad raadinayso talooyin ku saabsan sidii loo hagaajin aad shukaansi profile online ah ama talo ku saabsan sida loo la weyni ka xun qaban, kuwaas xisaabaadka Twitter ayaa lagu helay in aad daboolay!
Sidaas aan ugu buuqaysaan oo dheeraad ah, halkan waxaa ku qoran liiska (ee iga ra'yi ah) ka 15 ugu wanaagsan ee xisaabaadka Twitter in la raaco haddii aad raadinayso talo shukaansi:
Shannon waa cilmi nafsiga ah oo shukaansi iyo qoraa xiriirka oo dhawaan daabacay buug wareegi hareeraha ka welwelidda shukaansi iyo bixiyaa ilaa habab iyo farsamooyin oo ku saabsan sida si wax looga qabto in welwelka iyo dunida shukaansi ugu. Eeg iyada cunto Twitter ee articles iyo xeelado talo shukaansi.
Julie waa khabiir ku maraan dunida shukaansiga online oo si joogta ah dhejisaa links in articles iyo videos ku saabsan iyada hanuun xiriir. Raac iyada cunto Twitter haddii aad xiiseynaysid in aad wax dheeraad ah oo ku saabsan sida si wax looga qabto dunida shukaansiga online barashada.
Simone waa galmo ah & blogger xiriir oo ka qabato kasta iyo dhammaan mawduucyada siiyo iyada. Haddii aad raadinayso qoraa oo geesinimo ka hadlaysaa mowduucyadooda ay ka mid shukaansi online in ay sida ay u soo iibsadaan lingerie sexy ah, hubi in aad baadhid iyada cunto Twitter xiriir in articles la xiriira.
Aaron Horton iyo Josh Nalven; Friends Guy Podcast (TheGuyFriends)
Haaruun iyo Josh jira laba saaxiibo oo marti podcast ah diiradda saaray shukaansi, xiriirka iyo galmada talo. Marka ay timaado mawduucyo ay diyaar u yihiin in ay ka munaaqashoodaan, waxba waa ka baxsan xadadka. Haddii aad cuncun inay maqlaan talo shukaansi ka laba guys funny iyo gebi daacad ah, ka dibna u fiiriso on Twitter.
Jen waa khabiir qoraa oo xiriir ah oo kor u bixisaa talo kuwa gaajaysan in badan oo ku saabsan adduunka oo shukaansi abid-wareeriya bartaan. Waxay ka hadlaysaa maadooyinka sida dayactirka xiriirka long-distance, sida in la qorsheeyo taariikhda la yaab leh ugu horeeyay iyo sida ay ula macaamili hadal heynta badnaa, ka mid ah mawduucyo kale oo badan. Riixdaa marayo iyada Twitter ku quudiyo si aad u hesho links in ay iyada shukaansi iyo xiriirka articles iyo sidoo kale qaar ka mid ah siyaabaha si degdeg.
April waa tababare shukaansi ku takhasusay ku xaaqay talo shukaansiga haweenka ka weyn a 40. Her shukaansi iyo xiriirka articles waa faahfaahsan iyo wargelin ah, badan sida iyada cunto Twitter, sidaa iyada hubi haddii aad raadinayso talo shukaansi ee dumarka waaweyn.
Christan waa khabiir shukaansi ka qora khaanadda a waana sababta Waxaad tahay Single. Waxay ka hadlaysaa oo mowduucyadooda ay ka sida loo sameeyo taariikhda marka hore la yaab leh in faa'iidooyinka isagoo hal. Waxay sidoo kale dhiiri raacsan Twitter inay galaan iyada la adigoo soo gudbinaya su'aalo shukaansi iyaga u gaar ah. Haddii aad su'aal ka gubanaya shukaansi aad rabto jawaabay, hubi iyada cunto Twitter.
Catalog Thought (ThoughtCatalog)
Catalog Thought bixiyaa ilaa a collection of shukaansi, xiriirka iyo talo galmo articles qoray dhawr ka qayb galay oo kala duwan ka ay website. Articles ay yihiin had iyo jeer funny iyo wax yar racy, sidaas website this (iyo Twitter feed) waa qumman yahay kuwa qiimaynaya in hab si waxashnimo ah oo daacad ah.
Joshua waa khabiir shukaansiga online ayaa ka kooban articles badan oo muddo sanado ah ku saabsan deegaanka ee khibradda. Tan iyo markii uu waa pro ah ee degaanka shukaansiga online, ayuu ka hadlaysaa mowduucyo sida sida ay u farsameeyaan email tayo sare-a si kaamilayna online aad shukaansi profile. Josh joogta ah akoonkiisa Twitter Wararka maqaalo la xiriira, si loo hubiyo in aad baadhid uu cunto haddii aad raadinayso qaar ka mid ah talooyin ku saabsan shukaansiga online.
YourTango waa website kale oo uu leeyahay tiro badan oo shukaansi iyo talo xiriir articles gurato by kooxdooda badan oo qorayaasha. Articles ay daboosho wax kasta oo qorraxda ku saabsan Xukunka shukaansi ku hoos, si loo hubiyo ay cunto Twitter si aad u hesho maqaallo in aad ugala hadasho wax kasta oo wax walba oo ku saabsan shukaansi.
Fauna Sulaymaan (thedatingtruth)
Fauna waa khabiir shukaansi oo bixiya talo xiriirka u astaysan in labada jinsi iyo bixisaa aragtiyo iyada oo ku saabsan arrimaha shukaansi kala duwan dadka ugu badan ayaa la kulantay, sida sida ay u sheegaan haddii qofka aad shukaansi adiga kugu habboon tahay in sida loo joojin karo jiidanaya dadka khalad. Raac iyada on Twitter xiriir in articles iyada oo quip xiriirka marmar.
Dan waa qoraa iyo u dhaq-yaqaano oo uu ku talo galmo column Savage Love sidoo kale uu podcast Savage Lovecast, halkaas oo uu ka hadlayaa dhibaatooyinka xiriirka soo jireenka ah iyo kuwa caadiga ah. Fiiri Twitter uu cunto haddii aad raadinayso u qosol badan qaar ka mid ah, talo shukaansi weli daacad ah risque.
Erin waa Galliani shukaansi oo aan kaliya kor u bixisaa talo qoraal ah, laakiin sidoo kale marti sooray radio iyada u gaar ah show in qoreysa aragtiyo iyada dunida shukaansi ugu. Mowduucyo Her dhaxayn talooyin dhunkasho ugu horeysay si shukaansi on miisaaniyad. Raac iyada on Twitter ee xiriir la videos, articles iyo talooyin shukaansi.
Antonio waa Psychologist iyo Xiriirka daaweeye oo talo iyo xal kasta oo iyo cayn kasta oo diiddani xiriirka bixisaa. Eeg akoonkiisa Twitter, sida uu inta badan dhejisaa talooyin xiriir degdeg ah iyo xigashooyin iyo links in articles uu.
Wilma waa blogger haasaawe ka bixiyey talo iyada oo ku saabsan shukaansi furiinka ka dib, ku salaysan saarneyd-aragnimadeeda shaqsiyadeed. Raadi iyada xisaabta Twitter haddii aad xiiseynaysid in aad akhriska ku saabsan aragtiyo iyada oo ku saabsan galaya pool shukaansi ugu furiinka ka dib.